Gudoomiye Faarax isagoo ka hadlaya arrimaha soomaaliya waxaa uu yiri “soomaaliya, iyadda ha is qadariso, ha isla doodo, wax meel ha isla dhigto, wax kasta way ku heshiin kaartaa Soomaali, wanaagii iyo horumarkii iyo sharaftii ummadda soomaaliyeed ay leedahayna waa la soocelinkaraa, intaa uun baan kuu sheegikaraa”. Ayuu yiri Gudoomiye ku xigeenka mar aan weydiiyey soomaaliya waxa ka barankarto doorashadan...
Miyaad maqasheen Hooyadii Qaaliga ahayd ee 4 wiil oo ay dhashay ay birta isu lisanayaan.
4 taan wiil mid waa Ciidanka Sirdoonka Xamar midna waa Al-shabaab midna waa Maleeshiyada la socota duullaanka Kenya halka midka afraadna uu caseeye (baalashle ) ka yahay xamar . Si lama filaan ah ayay hooyadan Telefishinada uga aragtay hal xili wareed 3 ka mid ah wiilasheeda oo ay suura gal tahay inay nafta iska qaadaan hadiiba ay nolol isku arkaan halka midka afraadna uu halis u yahay 3 kale falalkooda...
Dowladda FKMG oo Sheegtey in ay soo Dhaweyneyso Ciidan kasta oo la Dagaalamaya Al-Shabaab
Wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka KMG Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo dalka dib ugu soo noqday ka gadaal markii uu safaro ku soo kala bixiyay dalalka Kiinya iyo Itoobiya. Sii Akhri Read More →
Faragelinta shisheeyuhu ku hayaan Dowlada iyo shacabka soomaaliyeed
Marka aad u dhaba gasho siyaasada wadanka soomaaliya ayaa waxaad dareemaysaa In Madax iyo minjo ay ka siman yihiin cilada ah inaysan isku filnayn dhinac walba aqoon, talo iyo dhaqaaleba sidaa awgeed waxaa muuqata inay yihiin dad wadankooda dhexdiisa ku ah shaqaale u shaqeeyaa umaddo kale oo ka leh dalkooda iyo dadkooda dano gaar ah. Tusaale ahaan waxaad arkaysaa nin madax ah oo soomaali ah oo...